Yini ongayivakashela eVeracruz, Mexico | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | América, I-México
La IVeracruz idolobha Kubaluleke kakhulu esifundeni saseVeracruz de Ignacio de la Llave. Idolobha futhi eliyisihluthulelo ngokwezokuhweba, ngoba linenye yezindawo ezibaluleke kakhulu zokuhweba zasolwandle eMexico. Itheku elingenye futhi endala kunazo zonke, ngoba sikhuluma ngomuzi owasungulwa nguHernán Cortés ngekhulu le-XNUMX.
Namuhla idolobha laseVeracruz lisekhona ukhiye ekuhwebeni, kodwa futhi kungumuzi ochumayo kwezokuvakasha. Indawo eguqukayo enogu olukhulu olunendawo yasolwandle futhi nedolobha elijabulisayo lapho sinokuningi okumele sikwenze. Qaphela konke ongakubona edolobheni laseMexico iVeracruz.
1 Yazi iVeracruz
2 San Juan we-ulua
3 Umnyuziyamu we-wax
4 I-Naval Museum eMexico
5 Isisekelo seSantiago
6 I-aquarium yaseVeracruz
7 IMalecón neZócalo
8 Umlomo woMfula
Idolobha laseVeracruz laziwa nangokuthi yi Wamaqhawe Veracruz, umuzi ogcwele izindaba zokuxoxa. Kuwo leli dolobha labhekana nokuphikiswa kokugcina kwabaseSpain enqabeni yaseSan Juan de Ulúa ngo-1825, kodwa baphinde babhekana namaFulentshi eMpini Yamaqebelengwane naseNyakatho Melika. Idolobha elaziwa ngokumelana nalo, ngezindawo zalo zomlando nangokubaluleka kokuhweba ethekwini lalo eliqhubeka nokuba nakho. Itholakala cishe ngamakhilomitha angama-400 ukusuka eMexico City, ogwini lweGulf of Mexico.
San Juan we-ulua
Uma kunendawo yomlando okufanele ivakashelwe edolobheni laseVeracruz, leyo yinqaba yaseSan Juan de Ulúa. Inqaba ebisebenza njengesizinda setheku, njengesibambiso sezinsimbi eziyigugu obekufanele zithunyelwe eSpain futhi nanjengejele. Uma uzovakasha, kungcono ukhokhe umhlahlandlela ozositshela ngekona ngalinye lenqaba nomlando walo, ngoba lokhu kuzokwenza ukuvakasha kube mnandi kakhulu. Kuyo ungabona ukuthi kwakuyini indlu yombusi, lapho uBenito Juárez ayehlala khona, kepha futhi ungabona amaseli abandayo namanzi eziboshwa noma Udonga lwe-Argollas, lapho kufika khona imikhumbi.
Okunye ukuvakashelwa okuhlekisa kakhulu edolobheni laseVeracruz uku Umnyuziyamu we-wax. Lo mnyuziyamu useduze ne-Aquarium, ngakho-ke singajabulela intambama yokuzijabulisa sivakashela lezi zindawo ezimbili. Ngaphakathi singabona amakamelo ahlukene anezinhlamvu ezahlukahlukene, kusuka kubahlabeleli kuya kubasubathi. Singathatha izithombe ezinabalingiswa kusuka kuFrankenstein kuye ku-Elvis Presley.
I-Naval Museum eMexico
El Umnyuziyamu waseNaval waseVeracruz Kuvulwe kusukela ngo-1897, futhi kunengqondo ukuthi edolobheni elibaluleke kangaka elinetheku banomnyuziyamu ohlobene nayo yonke into yasolwandle. Kulesi sigcinamagugu esikhulu singabona igceke elihle, elinemephu yomhlaba phansi, kodwa futhi kufanele sivakashele namakamelo ombukiso angama-26 anezinsizakusebenza zokulalelwayo. Sizokwazi ukuthatha uhambo ngomlando wokuzulazula futhi sifunde ngemikhumbi yempi yamanje kanye nokuvela kwemikhumbi eMexico.
Le ndawo yaziwa nangokuthi i- Isibhamu Bulwark. Kuyisakhiwo samasosha sangekhulu le-XNUMX esasinezinye izizinda eziningi zokuvikela idolobha. Namuhla kusele eyodwa kuphela, futhi yiyo engavakashelwa, ukuze ufunde kabanzi ngomlando wokuzivikela wedolobha owaziwa ngeHeroica. Ngaphakathi kuyasetshenziswa njengamamnyuziyamu ukugcina i-Fisherman's Jewels, amagugu angaphambi kweSpanishi anenani elikhulu.
I-aquarium yaseVeracruz iheha kakhulu izivakashi, ngoba ibaluleke kakhulu eMexico. Inezinhlobo zezinhlobo ezingama-250, futhi itholakala ePlayón de Hornos nase Ama-80% yizindawo zemvelo. Yindawo ekahle yokuvakashela nomndeni, ngoba ngaphezu kokuzijabulisa, izingane nabantu abadala bazokwazi ukufunda okuningi ngemvelo nezinhlobo ze-aquarium. Indawo eyodwa wonke umuntu afuna ukuyivakashela yi-Ocean Fish Tank, umhubhe ongabona kuwo izinhlobo zeGulf of Mexico zihlanganiswe ngokuphelele nemvelo.
Kunezindawo ezimbili edolobheni laseVeracruz ezihehe kakhulu, zilungele ukuzijabulisa. Ngakolunye uhlangothi iMalecón, indawo ethekwini lapho, ngaphezu kokubona izikebhe ezibekiwe, ungajabulela ukudla kwesifunda ezindaweni zokudlela ezisendaweni noma uthenge okuthile okujwayelekile. IZócalo enye indawo okufanele udlule kuyo, ngoba iyi- Plaza Imeya yedolobha. Iphoyinti lomhlangano lapho kutholakala khona isigodlo sikaMasipala kanye nethempeli elikhulu.
Umlomo woMfula Idolobha eliseduze nenkaba yeVeracruz. Uma sifuna ukuchitha usuku oluthule emabhishi asendaweni futhi siqhelelane nedolobha, lapho-ke kufanele siye eBoca del Río. Ibhishi iMocambo lingenye yezindawo ezaziwa kakhulu, kepha kunabanye abaningi abangakujabulela ukushiswa yilanga ngosuku.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » América » Yini ongayivakashela eVeracruz, eMexico
5 okukhangayo eKiev